अब अटो सम्बन्धी सबै सेवा एपबाटै ! - जनदिशा
national samachar बजार बिज्ञान/प्रबिधि
अब अटो सम्बन्धी सबै सेवा एपबाटै !
janadisha January 25, 2020	No Comments AutoITMobile App
काठमाडौं । अब नेपालमा अटो सम्बन्धी सबै सेवा एपबाट नै उपलब्ध हुने भएको छ । ग्यारेज इन्क नामको यो एप पर्सनल कम्प्युटर र मोबाइल दुबैमा प्रयोग गर्ने सकिनेछ । सवारी साधनको मर्मत, सर्भिसिङ तथा पार्टपुर्जाको लागि एप थिचेरै सेवा लिन सकिने छ । साथै ब्लु बुक नवीकरण तथा बिमा सेवा एपमा रहेको छ । सवारीसाधन नवीकरण गर्ने मिति समेत एपले नै नोटिस गर्नेछ । यसले नै सवारी साधनको सर्भिसिङको खर्चको हिसाब–किताब समेत राख्नेछ ।
एपमा हाल दुई पाङग्रे मोटरसाइकल प्रयोगकर्ता लक्षित गरि सबै ब्रान्डका सामान र सेवा सहज उपलब्ध गराइने छ भने ग्राहकले अर्डर गरे अनुसार भनेकै ठाउँमा डेलिभरी समेत गरिने एप कम्पनीले बताएको छ ।
एपको उद्घाटन शनिवार प्रमुख अतिथी काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बिद्या सुन्दर शाक्यले ललितपुरको कुपन्डोलमा आयोजित एक कार्यक्रममा गरेका हुन् । एपको प्रयोगबाट सवारी धनीले सहजै विभिन्न सेवा उपभोग गर्न पाउनेमा आफु विश्वस्त भएको मेयर शाक्यले मन्तव्यको क्रममा बताए । यस ग्यारेज एप सञ्जालमा दर्तावाला ग्यारेजलाई मात्र प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा आधिकारिक ग्यारेजका भौतिक पूर्वाधार मापदण्ड समेत तोकिनु पर्ने बताए ।
एपले हाल काठमाडौँ उपत्यका भित्रका प्रमुख २० आधिकारिक ग्यारेजलाई समेटेको छ । आगामी दिनमा देशभरका ग्यारेजहरूलाई यस एप सञ्जालमा राखी सेवा विस्तार गर्ने योजना रहेको कम्पनीले बताएको छ ।
Previous Previous post: भेनेजुएलाका विपक्षीले छाडे गुऐडोको साथ्, गरे बिद्रोहको घोषणा
Next Next post: एमसीसी विरुद्ध माइतीघरमा धर्ना